HTC One Max ကို ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ UK မှာ၀ယ်ယူနိုင်တော့မည်။ ~ The ICT.com.mm Blog
HTC One Max ကို ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ UK မှာ၀ယ်ယူနိုင်တော့မည်။
HTC One Max က Britain လူမျိုးတွေ လက်ထဲကို အရင်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Vodafone UK က အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ Phablet ဖုန်းကို Carrier Exclusive အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ် အတွင်းမှာ Britain မှာ ရောင်းချဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ပြောကြားပါတယ်။ Customers တွေအနေနဲ့ လစဉ်ကြေး £47 Plan ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် £49 နဲ့ရရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ One Max ကို Unlocked Version လည်းရရှိနိုင်ပြီး 32GB Model အတွက် £600($958) နှုန်းနဲ့ MobileFun.co.uk မှာရရှိနိုင်ပါတယ်။
Ref : http://www.engadget.com/2013/10/15/htc-one-max-to-reach-vodafone-uk-this-week-costs-600-unlocked/?ncid=rss_truncated
Newer ဘယ် နည်းပညာ Company မှာသင်အလုပ်လုပ်ချင်သလဲ? Google? Apple? Facebook? Microsoft?
Older Smartphones အသုံးပြုသူ တွေရဲ့84% က အိပ်ယာထတာနဲ့ Apps တွေအသုံးပြုကြ။